“ဆံပင်အကြောင်း တစေ့တစောင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဆံပင်အကြောင်း တစေ့တစောင်း”
Posted by ခင်ခ on Jul 21, 2014 in Creative Writing, Health & Fitness | 15 comments
ဆိုသလိုပါဘဲ မနေ့က ညနေကျုပ်ဆံပင်ညှပ် ဆံပင်ဆေးဆိုး သွားလုပ်တော့ အဲဒီဆိုင်အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်ဆံပင်အလှပြင်ရင်း ဆိုင်က ကလေးမလေးနဲ့ စကားစမြည်းပြောနေတဲ့ထဲက
” ဟိုတလောက ဆံပင်ကောက်၊ဆေးဆိုးလုပ်ပြီး သိပ်မကြာဘူး ဘာလို့မှန်းမသိ အစားဘဲအစားမှားလေလားမသိ ဆံပင်တွေ အဆုပ်လိုက် အဆုပ်လိုက် ကျွတ်လိုက်တာ အဲဒါ ဆံပင်ပြန်ပေါင်းတင်ပြီး အခုလိုဆံပင်သားပြန်တက်အောင်မနဲ ဂရုစိုက်မွေးခဲ့ရတာ”
အဲလိုစကားကြားခဲ့မိလိုက်လို့ လူ၏ ဦးခေါင်းအရေပြားက တွင်းငယ်လေးများမှ ပေါက်နေတဲ့ ဆံပင်အကြောင်း ဖတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့သလောက် ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချ မျှဝေအုံးမှဘဲလို့ အတွေးဖြစ်မိတယ်။
လူ၏ ဦးခေါင်းအရေပြားတွင် တွင်းငယ်လေးများမှ ဆံပင်သည်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အဲဒီတွင်းငယ်လေး အောက်ခြေတွင် အဖုငယ်လေးရှိပါသည်။ ထိုအဖုငယ်လေးသည် ဆံပင်၏အမြစ်ဖြစ်ပေသည်၊ ထိုဆံပင်၏ အမြစ်သည် အရောင်ဖြူပြီး နူးညံသည့်သဘောရှိပါသည်။ ဆံပင်တွင် အတွင်းတစ်ထပ် အပြင်တစ်ထပ်ရှိပြီး အတွင်းအထပ်သည် ဆံပင်၏အမြစ်နှင့်ကပ်လျှက် ရှိပြီး အလွှာအားဖြင့်နှစ်လွှာရှိပါသည်၊ ထိုအလွှာသည် ဆံပင် အမြစ်၏ အပြင်နှင့်အတွင်း အခွများဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုအဖုငယ်လေးတွင် သွှေးလွှတ်ကြောရှိသဖြင့် ဆံပင်ကို သန်အောင်လုပ်သော ပစ္စည်းသည် သွေးထဲတွင်ပါရှိပြီး ထိုသွေးကပင် အညစ်အကြေးများကို ပယ်ဆောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိလေသည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဖြစ်သည့်အခါ ထိုအဖုငယ်လေးမှပင် ဆံပင်ပြန် ပေါက်လေသည်။ ဆံပင်ပြန်မပေါက်ဘဲ ထိပ်ပြောင်နေခြင်းသည် ထိုအဖုငယ်လေးများ ပျက်ဆီးသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုဆံပင်တွင်းငယ်တိုင်းတွင် အဆီဂလင်းရှိပါသည်။ ထိုဂလင်းမှ ဆီကဲ့သို့သော အရည်ကိုထုတ် ပေးပြီး ဆံပင်ကိုချောမွတ်စေပါသည်။ ဆံပင်သည် ခိုင်မာ၍ ပျော့ပျောင်းသည် ရုန်းကန်သတ္တိလည်းရှိသည် ဆံပင်တွင်းငယ်တွင် ကြွက်သားရှိသောကြေင့် မျိုးရိုးဇာတိကိုလိုက်၍လည်းဖြစ်နိုင်ပြီး ကွက်၍ ဆံပင်မပေါက် ခြင်းသည် အားကုန်ခန်းခြင်းနှင့်ဆိုင်လေသည်။ ထိုကြောင့်ဆံပင်လှခြင်းသည် လူ၏ကျန်းမာရေးပေါ်တွင် တည်မှီပြီး ဦးခေါင်းအရေပြားသန့်ရှင်းကာ သွေးသည် ကောင်းမွန်လည်ပတ်လျက်ရှိလျှင် ဆံပင်သားကောင်း တတ်ပါသည်။ ရောဂါတစ်မျိုး လူတွင်စွဲကပ်ပါက သွေးညှစ် ညမ်းလာသဖြင့် ဆံပင်တွင် ထိခိုက်မှုဖြစ်တတ် လေသည်။ သွေးအားနည်းသူ၏ဆံပင်သည် အရောင်မတောက်ပတတ်ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။
ဆံပင်အသွေးအရောင်ခြောက်ပါက ဦးရေပြားကိုနှိပ်နယ်ပေးသင့်ပြီး နှိပ်ပေးရာတွင် လက်မနှစ်ချောင်းကို နားရွက်နောက်တွင် ထောက်ထားပြီး ကျန်လက်ချောင်းများက ငယ်ထိပ်ဝန်ကျင်းကို ဖြန့်ကာ ဦးရေပြားကို လှည့်၍နှိပ်ပေးသင့်ပါသည်၊
ဆံပင်သားပျက်စီးရခြင်းမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှခေါင်းလျှော်ခြင်း၊ လေပူနေပူတွင် သွားလာလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ ကောက်ဆေး ဖြောင့်ဆေးများ မကြာခဏသုံးခြင်း၊ ဆေးဆိုးကာပုံသွင်းခြင်း ( ကောက်ဆေး ဖြောင့်ဆေးနှင့် ရှန်ပူခေါင်းလျှော်ရေ တို့တွင့် ဓာတုပစ္စည်းများပါ၍ ထိုဓာတုပစ္စည်းများသည် တွင်းငယ်လေးများမှတဆင့် ဆံပင်၏ အမြစ်ချေထဲသို့ စိမ့်ဝင်မှု ဖြစ်သဖြင့် ကြိမ်ဖန်များစွာပြုပါက ဆံပင်မြစ်၏ အထပ်လွှာပျက်ပြီး ဆံပင်မြစ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်)။
၁။ နေပူထဲမှ ပြန်လာပြီး နွမ်းနယ်နေစဉ်၊ ဓမ္မတာရာသီလာလို့ အားနည်းနေစဉ်၊ ကလေးမွေးပြီးစအချိန်များတွင် ဆံပင်ကောက်ဆေးသုံးခြင်းမျိုး မပြုသင့်ပါ။
၂။ ဆံပင်ကောက်ပြီး တစ်ပတ်ခန့် ရှန်ပူနှင့်ခေါင်းလျှော်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။
၃။ ကောက်ပြီး ဆံပင်ကို မကြာခဏခေါင်းလျှော်လိုလျှင် ခေါင်းလျှော်ရည်အပျော့စားသုံးသင့်ပါသည်။
၄။ ခေါင်းလျှော်ပြီးလျှင် ဘီးကျဲကျဲနှင့်အရင်ဖီးခြင်းသည် ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲခြင်းမဖြစ်သဖြင့် ဆံပင်အမြစ်အိတ် လေးများနာကျင်မှုမဖြစ်စေသောကြောင့် ဘီးကျဲကျဲနှင့်ဖီးရှင်းပြီးမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာဘီးများ သုံးသင့်ပါသည်။
၅။ ဆံပင်ကောက်ခြင်းနှင့် ဆေးဆိုးခြင်း တစ်ပြိုင်းတည်း သိုမဟုတ် နှစ်ပတ်အတွင်းပြုခြင်းသည် ကောက်ဆေး နှင့်ဆိုးဆေးတွင်ပါဝင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများ မတည့်သဖြင့် ဆံပင်များ အကွက်လိုက် အဆုပ်လိုက် ကျွတ်စေ သဖြင့် သတိပြုသင့်ပါသည်။
၆။ ဆံပင်ကောက်ခြင်းကို တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ် (၆)လလောက်ခြားပြီး ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဆံပင်သားပျက်စီးမှုကို နည်းစေပါသည်။
၇။ ဦးရေပြားသန့်ရှင်းအောင်ထားခြင်းသည် ဆံပင်အခြေတွင်းငယ်လေးများ အောက်စီဂျင်ရရှိမှုကောင်းစေ သဖြင့် ဆံပင်အမြစ်အားရှိစေပြီး ဆံပင်ကိုသန်စွမ်းစေပါသည်။
၈။ ဆံပင်များကို ခေါင်းလျှော်ပြီးသည့်အခါ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါကြီးများဖြင့်သုတ်ခြင်းသည် ဆံပင်ကြေလွယ် ကျွတ်လွယ် ပြတ်လွယ်သောကြောင့် ပ၀ါအသေးစားဖြင့် အုပ်ထားပြီးမှ ညင်သာစွာပွတ်သုတ်ပေးသင့်သည်။
၉။ ဆံပင်သားခြောက်မှုဖြစ်လျှင် မနက်စောစော(၉)နာရီမတိုင်မှီ ရေအ၀ချိုး ခေါင်းလျှော်ရည်အပျော့စားဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆံပင်သားခြောက်လျှင် သံပရာရည်နှင့် အုန်းဆီရော၍ လိမ်းပေးသင့်ပါသည်။
၁၀။ မြင်းခွါရွက်သတ္တုရည်ကို သကြားထဲ့၍ ထမင်းစားပြီးမနက်၊ ည နှစ်ကြိမ်သောက်ခြင်းသည် ဆံဖြူခြင်းမှ ကင်းဝေးသက်သာစေပါသည်။
Precious post for me.
အိုးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုစ့်မို့ ကူးယူမှတ်သားသွားပါတယ် ကိုခင်ခရေ။ မသိသေးတာလေးတွေသိလိုက်ရပါတယ်
ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းနေစေဖို့ အိမ်မှာပဲ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း…တွေ ရှိပါတယ်။ သင့်အိမ်မီးဖိုချောင်မှ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တာတွေကို အသုံးပြုပြီး သင့်ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းအောင် လုပ်ကြည့်ပါ။
– အုန်းသီးကိုခြစ်၊ အရည်ညှစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၄၅ မိနစ်ကြာ ထည့်ထားပါ။
– အဲဒီနောက် ရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်ပြီး အုန်းနို့အပေါ်ယံမှာ စုနေတဲ့ ခရင်မ်ကို ခပ်ယူပါ။
– အဲဒီခရင်မ်ထဲကို သံပရာအရည် သုံးစက်ထည့်ပြီး သေချာစွာ ရောမွှေပေးပါ။
– ရလာတဲ့ အရောအနှောကို ဦးရေပြားပေါ်လိမ်းပြီး ခေါင်းစွပ်စွပ်ထားပါ။
– တစ်နာရီလောက်ထားပြီးမှ ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။
– နွာနို့တစ်ခွက်ထဲကို ပျာရည်တစ်ဇွန်း ထည့်ပါ။
– စတော်ဘယ်ရီသီး အနည်းငယ်ကို ခြေထည့်ပြီး အားလုံးကို နှံ့အောင် သေချာစွာ ရောမွှေပေးပါ။
– ရလာတဲ့ အရောအနှောကို ဆံပင်ပေါ် သုတ်လိမ်းပြီး အခြောက်ခံထားပါ။
– နှစ်နာရီကြာတဲ့အခါ ရှမ်ပူနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။
– နွာနို့က ဆံပင်ဖြောင့်စင်းဖို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ နွားနို့ကို ဖျန်းလို့ရတဲ့ ပုလင်းထဲထည့်ပြီး ဆံပင်ပေါ်ကို ဖျန်းပေးပါ။
– အဲဒီနောက် ဆံပင်ကို ရှမ်ပူနဲ့ လျှော်ပါ။
– ဆံပင်တွေ ရေစိုနေတုန်းမှာ ညင်သာစွာ ဘီးနဲ့ဖြီးပါ။
– သံလွင်ဆီကို အနည်းငယ် အပူပေးပြီး ဆံသားအားလုံးအနှံ့ လိမ်းပေးကာ ဦးရေပြားကို ညင်သာစွာ နှိပ်နှယ်ပေးပါ။
– အဲဒီနောက် တဘက်နဲ့ ခေါင်းပေါင်းပြီး နာရီဝက်ကြာမှ ခေါင်းလျှော်ပါ။
– ဆံသားကို တောက်ပြောင်စေရုံ သာမက အရှည်မြန်စေပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ပေးပါက ဆံသားဖြောင့်စင်း စေပါတယ်။
လှပရေးရာ မနေနိုင်လို့ ဆက်နွယ်မယ်ထင်တာလေး လာပေးတာ။
ဆံပင် အဖျားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်း ကင်းစေရန်
ဆံပင်သားကို အရောင်ဆိုးဆေး၊ အရောင်ချွတ်ဆေး၊ ဆံပင် လိမ်းဂျဲလ်၊ ဆံပင်ဖျန်းစပရေးနဲ့ ဆံပင်လေမှုတ်စက် စတာတွေ ထိတွေ့မှုကြောင့် ဆံပင်သား ခြောက်သွေ့ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေရုံ သာမက ဆံပင်အဖျား နှစ်ခွကွဲတာကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဦးရေပြားကို ပုံမှန်နှိပ်နယ်ပြီး ရေနွေးငွေ့ပေးပါ
ဦးရေပြားကို အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီနဲ့ မုန်ညင်းဆီတို့ လိမ်းပြီး တစ်ပတ် နှစ်ကြိမ် အနည်းဆုံး ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေး ပါ။ လိမ်းပြီးနောက် အချိန် ၅-၇ မိနစ်ကြာ ဆံပင်သားကို ရေ နွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းခံပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ဆံပင်သားထဲကို အဆီ ဝင် ရောက်မှု ကောင်းစေပြီး ဆံပင်သား အရင်းနေရာမှာ သွေးလှည့် ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဆံပင်သား စိုပြည်စေတဲ့ အတွက် ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွကွဲတာကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
ဆံပင်ကို လေပြင်းပြင်း တိုက်ခတ်မှု မရှိစေရန် ကာကွယ်ပါ
ဖစ်နိုင်ရင် လေပြင်းပြင်း တိုက်ခတ်တဲ့ နေရာကို မသွားပါနဲ့။ သွားမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ပဝါစည်းနှောင်ထားသင့်ပါတယ်။ နေပူထဲ သွားမယ်ဆိုရင် ထီးကို အမြဲဆောင်းသင့်ပါတယ်။
ဆံပင်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း မပွတ်သပ်ပါနှင့်
ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ချက်ချင်း ခေါင်းမဖြီးပါနဲ့။ ပဝါနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း သုတ်တာကိုလည်း ရှောင်ပါ။ ဒီနည်းတွေက ဆံပင် အဖျားနှစ်ခွ ကွဲစေနိုင်ပါတယ်။ (၁) ဆံပင်အရင်းနေရာကို ကြက်ဥ/ဘဲဥအကာတစ်လုံး၊ သံပရာရည် ထမင်းစား ဇွန်း နှစ်ဇွန်း၊ မုန်ညင်းဆီ ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ဒါမှမဟုတ် သံလွင်ဆီကို ထည့်ပြီး လိမ်းကာ နှိပ်နယ် ပေးပါ။ အချိန် တစ်နာရီအကြာမှာ ခေါင်းလျှော်လိုက်ရင် ဆံပင် သားကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။
အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစာဟာ ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွ ကွဲတာကို သက်သာစေ ပါတယ်။ သင်စားတဲ့ အစာမှာ ဗီတာမင် အေ၊ ဘီနဲ့ ဒီ၊ ပရိုတင်းနဲ့ ကယ်လ်စီယမ် ပါဝင်စေဖို့ နွားနို့၊ ဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ချဉ်၊ ပဲပုပ်စေ့၊ သစ်သီး၊ ဟင်းရွက်စိမ်း စတာတွေကို ထည့်စားသင့် ပါတယ်။ ရေကိုလည်း များများသောက်ပါ။
မနက်ခင်းနဲ့ ညနေခင်းမှာ လမ်းလျှောက်တာနဲ့ တခြား လေ့ ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။
အိပ်ရာမဝင်ခင် ခေါင်းဖြီးပါ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ဦးရေပြားရှိ အဆီဂလင်းက အဆီထွက်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ဆံပင်အဖျားကို မကြာခဏ တိပေးသင့်ပါတယ်။
Credit to _ original uploader
ခွေးသေးပန်းရွက်ကိုပြုတ်ပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ရောကာ လျှော်ပါက ဆံပင်ပျော့ပြောင်းပြီး ဗောက်များကင်းကာ ဆံပင်များသန်စွမ်းပါတယ်။
ကြိတ်မှန်ရွက်အရည် သို့မဟုတ် အမှုန့်ကို အုန်းဆီနှင့်ဖျော်လို့ ဆံပင်ကိုလိမ်းပေးရင် ဆံပင်စောလျှင်စွာဖြူခြင်း ကင်းပါသည်။ ကြိတ်မှန်ရွက်မရပါ ထောလပတ်ရွက်ဖြင့်လည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်စာအနေနဲ့ ငါးမြစ်ချင်း ငါး၏ အူများ ကြော်စားနိုင်ပါသည်။
ကြိတ်မှန်ရွက်၊ နှမ်းနက်၊ ဆီးဖြူသီး (၃)မျိုးကို ရောကြိတ်ပြီး ပျားရည်နှင့်ရောကာ ပုံမှန်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်စား ပေးခြင်းသည်လည်း ဆံပင်နက်လို့ အရွယ်တင်နုပျိုစေပါသည်။
Is there any way to treat oily scalp?
ဆံပင်ဖြူတာ..လေ..မျိူးရိုးတို့ ..သွေးသားတို့ နဲ့ ဆိုင်သလားလို့ .. ။
ကျနော့်အဖေဆို…အသက် ၆၀ ကျော်ပြီ..ဆံပင် မဖြူဘူး ။
ကျနော်တို့ လည်း…. မဖြူလောက်ဘူး..ထင်တယ်.. ။
နောင် ရိုး says:
မြင်းခွာရွက်သတ္တုရည်ဆိုလို့…ခုပေါ်နေတဲ့ လွင်မြင့်အောင်မြင်းခွာရွက်ဆေးမျိုးရော သောက်လို့ရပါသလားခင်ဗျာ..
တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာ မှန်ကန်စွာထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးရှိသလို တစ်ချို့က အရွက်၊ အသီးရဲ့ အနံကိုဘဲ အသုံးပြုပြီး စီးပွားဖြစ်တစ်ကိုယ်ကောင်းကျင့် ထုတ်လို့ရောင်းနေတာတွေလည်း ကြားနေ ဖတ်နေရတာတွေလည်းရှိနေ ပါသေးတယ်။
အခု နောင်ရိုး ပြောတဲ့ဆေးဟာ မြင်ခွာရွက်သတ္တုရည်စစ်ရင် သောက်ရပါတယ်။
တစ်ခါတလေတော့လည်း အရွက်လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်တာကတော့ ပိုစိတ်ချရတာပေါ့ဗျာ အလုပ်တော့နည်းနည်းရှုပ်မလားဘဲလေ။
ရှမ်းပြည်ဖက်သွားလည်…ငှက်ဖျားရ.. ဆေးတွေသောက်ရပြီးနောက်ပိုင်း ကျွတ်လိုက်တဲ့ဆံပင်.. ဆံပင်ကို မကောက် မဖြောင့်တဲ့အပြင် ဒရိုင်ယာတောင် တော်ရုံမသုံးခဲ့ဘူး.. :(( ဆံပင်တွေကျွတ်လိုက်တာမှကုန်တော့မယ်.. ခေါင်းလျှော်ရည်လည်း ကောင်းပေ့ဆိုတာတွေဝယ်လျှော်တာပဲ.. အပေါ်ကနည်းတွေထဲ လွယ်လွယ်ကူကူနည်းလေးတွေစမ်းသပ်ကြည့်အုန်းမယ်..
ငယ်တုန်းက “ဆံပင်တွေ အတို တော့ မဖြတ် ပါနဲ့” တဲ့။
တစ်ခြားသူမဟုတ်။ အဖွား က ။
အခုတော့ ကျွတ်လွန်း နှမြောလဲ မရတော့။
အတိုဖြစ်တော့ ကိုယ့်ဆံပင်အရှည်ကို ပြန်လွမ်းပြီး အရှည်ပြန်ထားနေပြန်တယ်။
ဆံပင် ကျွတ်တဲ့ အကြောင်း တွေထဲ ဆံပင် ကို ပိုနီတေး အမြဲစည်းထားတာလဲ တစ်ချက်လို့ တွေ့တယ်။
အသက်ကြီးလာတာကတော့ အဓိက တရားခံ ဖြစ်ပေမပေါ့။
အကြံပြု စာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျန်​တာ​တွေ​တော့ ကျုပ်​မသိဘူးရယ်​ ။ တစ်​​လောက ကြားလိုက်​မိတာက ကျုပ်​တို့ သုံး​နေတဲ့ VCD/ DVD disc ​တွေမှာ ဆံပင်​​တွေပါဆိုဗျ ။ အဲ့ဒါဟုတ်​လား ?¿ ဟင်​
ကျုပ်​တို့ဆီမှာ ဆံပင်​ဒိုင်​​တွေ မှိုလို​ပေါက်​​နေတယ်​ဗျ ။ သန်​ရင်​ ဟို အ​မွှေး​တောင်​ထည့်​​ရောင်းလို့ရဆိုပဲ ။
မှတ်​ချက်​ ။ ဟိုအ​မွှေး = ဂျိုင်း​မွှေး
ဆံပင်နဲ့ VCD disc ဘယ်လိုများလုပ်ပါလိမ့်
မွဲခြောက်နေသော ဆံပင်သား တောက်ပြောင်ချောမွတ်စေမည့် သဘာဝနည်းများ
အမျိုးသား ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေကို စတင်တွေ့တွေ့ချင်း ဆံပင်ပုံစံကို သတိထားမိတယ်လို့ လေ့လာမှု တစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံရှိပြီး ဆံပင်သားတွေ တောက်ပ သန်စွမ်းနေရင် အလှဂုဏ် ပိုမိုတင့်တယ် လာပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆံပင်သားတွေ နွမ်းနယ်ပြီး ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေရင် အလှလည်း ညှိုးနွမ်းရ တတ်ပါတယ်။ ဆံပင်သားဟာ နေရောင်ခြည်ဒဏ် ကြာကြာခံရတာ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ အရပ်မှာ နေရတာ၊ အပူပေးမှု များတာတွေကြောင့် တောက်ပမှု လျော့ကျပြီး ခြောက်သွေ့ မွဲခြောက် နေတတ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် ပုရိသတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဆံပင်သားကလည်း တောက်ပ ကျန်းမာလှပနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွဲခြောက်နေတဲ့ ဆံပင်တွေ တောက်ပလာစေဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အိမ်တွင်း ကုထုံးတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
သင့်ဆံပင်တွေ သန့်စင် သွားစေမယ့် ရှမ်ပူကို ရှာလို့မတွေ့ဘဲ ဖြစ်နေပါသလား။ ရှလကာရည်ကို သုံးလိုက်ပါ။ ရှလကာရည် ခွက် (Cup) တစ်ဝက်ကို မတ်ခွက်တစ်ခွက်စာ ရေထဲကို ရောထည့်ပြီး ခေါင်းလျှော်ပြီးစ ဆံပင်တွေကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လောင်းချလိုက်ပါ။ ရေနဲ့ ပြန်ဆေးစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီနည်းကို တစ်လမှာ နှစ်ကြိမ်-သုံးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရှလကာရည်မှာ ဆံပင်သားမှာ ကပ်ညိနေတဲ့ အညစ်အကြေး၊ ဖုန်မှုန့်၊ ဆီ စတာတွေကို ကင်းစင်စေနိုင်တဲ့ အာနိသင် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးတာကြောင့် သင့်ဆံပင်သားဟာ အရင်ထက် ပိုတောက်ပြောင် ချောမွတ်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်ကို ရွှေရောင်ဆိုးထားရင် ဆံပင်ကို စုပြီး သံပရာရည်နဲ့ ပက်ဖျန်းပေးပါ။ နောက်တစ်နည်း အနေနဲ့ ရေမတ်ခွက် တစ်ခွက်ထဲကို သံပရာသီး နှစ်လုံး အရည်ညှစ်ထည့်ပြီး လျှော်ပြီးစ ဆံပင်သားပေါ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လောင်းချလိုက်ပါ။ သံပုရာသီးထဲက စစ်ထရစ် အက်စစ်ဟာ ဆံပင်သားကို သန့်စင်သွားစေပြီးသံပရာရနံ့ စွဲကျန်စေကာ နေဒဏ်ကြောင့် နွမ်းနယ် ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံပင်သားကို သဘာဝကျကျ တောက်ပ နေစေပါတယ်။ သံပရာရည် ပက်ဖျန်းထားတဲ့ ဆံပင်ကို အသွားကျဲတဲ့ ဘီးနဲ့ ဖြီးပေးပါ။
မုန့်ဖုတ်ရာတွင် သုံးသော ဆော်ဒါမှုန့်
ဆော်ဒါမှုန့်ကို မျက်နှာ အရေပြား ကြေးချွတ်တဲ့ အခါမှာရော ဆံပင်သန့်စင်အောင် ဆေးကြောရာမှာပါ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆော်ဒါမှုန့် တစ်ခွက်ကို ရေနည်းနည်းနဲ့ စေးပျစ်တဲ့ အထိ ရောမွှေပြီး ဆံပင်သားပေါ်မှာ ညီညီမျှမျှ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ လောက် ထားပြီးမှ ရေအေးနဲ့ ဆေးကြောချလိုက်ပါ။ အချိန်မပေးနိုင်ရင် ရှမ်ပူနဲ့ ဆော်ဒါမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းကို ရောမွှေပြီး ဆံပင်သားပေါ် သုတ်လိမ်း ခေါင်းလျှော်ကာ ရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ ဆံပင်သားကို သန့်ရှင်း စင်ကြယ်စေတဲ့ အပြင် တောက်ပ သန်စွမ်းစေပါတယ်။
ဆံပင်သားမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ ထောပတ်သီးနဲ့ ဒိန်ချဉ်က အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဆံပင်သား ကျန်းမာဖို့နဲ့ ဆံပင်နှစ်ခွ ဖြစ်တာတွေ သက်သာစေဖို့ ထောပတ်သီး တစ်လုံးကို ချေပြီး ဒိန်ချဉ်နည်းနည်းနဲ့ သမအောင် မွှေပါ။ ပြီးရင် အဲဒီအရောကို ဆံပင်သားပေါ် လိမ်းကာ ပလတ်စတစ် ခေါင်းစွပ်စွပ်ထားပြီး တစ်နာရီကြာမှ ခေါင်းလျှော်ပါ။ ရေအေးနဲ့ ဆေးချပေးပါ။
ခေါင်းလျှော် ပြီးချိန်မှာ ဆံပင်ကို ကွန်ဒီရှင်နာသုံးပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဆံပင်သားကို စိုပြည်စေကာ တောက်ပြောင် စေပါတယ်။ သင့်ဆံပင်က အဆီပြန်တဲ့ ဆံပင်ဆိုရင် ဆံပင်အဖျားတွေကို ကွန်ဒီရှင်နာလိမ်းပြီး ထိန်းသိမ်းပေးပါ။
ဆံပင် လေမှုတ်စက်ကို မကြာခဏ သုံးမိနေသလား။ အပူဒဏ်ကို တာရှည် ခံရတာကြောင့် ဆံပင်သားရှိ သဘာဝ အဆီတွေ လျော့ပါးကာ ဆံပင်မွဲခြောက် ထိခိုက် နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံကေသာ တောက်ပြန် သန်စွမ်းဖို့ နောက်ထပ် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုက ဆံပင်ကို သဘာဝ အတိုင်း လေနဲ့ခြောက်သွေ့အောင် ထားပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင် စိုစွတ်နေချိန်မှာ ဘယ်တော့မှ ဘီးမဖြီးပါနဲ့။
ခရီးသွားတဲ့ အခါ အထူးသဖြင့် စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် စီးတဲ့အခါတွေမှာ သင့်ခေါင်းကို ပဝါနဲ့ အုပ်ထားပေးပါ။ ဒါမှသာ ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်ဒဏ်၊ ဖုန်မှုန့်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ လေထုနဲ့ လေဒဏ်ကြောင့် ဆံပင်သား ထိခိုက်မှု မရှိအောင် ပဝါက ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။